Maxaa Turpial 2.0 na keenaya + Ku rakibida nooca horumarinta | Laga soo bilaabo Linux
Maxaa Turpial 2.0 na keenaya + Ku rakibida nooca horumarka
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Aplicaciones, GNU / Linux, Noticias, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Kuweena microblog Had iyo jeer waan isticmaali jiray Turubka, macmiil u ah Isku mid ah y Twitter ku qoran Python iyo horumariyo gaar ahaan loogu talagalay Kanaima.
En Tijaabada Debian hadda waa 1.6.7 version ee barnaamijkan miisaanka fudud, laakiin soosaarayaasheedu waxay horey noo siiyeen horudhac waxa aan ku arki doonno Wareeg 2.0.
Sida aan ku arki karno shaashadda, Wareeg 2.0 waxay heshay dib u habeyn ballaaran oo hadda waxaan isticmaali karnaa koontadeena Isku mid ah o Twitter isku mar. Qaab dhismeedka ayaa hadda nadiif ah badhannada tallaabada xagga hoose ahna waa la beddelay.
On wiki ah Turubka Waxay nooga tagayaan tillaabooyinka soo socda si aan u rakibno nooca horumarinta, oo aan lagu talineynin jawiga wax soo saarka. Tallaabooyinka waa kuwa soo socda:
1 1.- Ku rakib libturpial
2 1.2- Cusbooneysii libturpial
3 2.- Turjumaan
4 2.1- Rakibidda Turpial
5 2.2- Cusboonaysiinta Turpial
6 3.- Waayahay, horey ayaan u rakibnay Turpial, oo hadda?
1.- Ku rakib libturpial
Tan waxaan u furaynaa terminal (waa inaanu dheelitirnaa git-core) oo waxaan dhigay:
$ git clone git://github.com/satanas/libturpial.git libturpial
Tani waxay abuuri doontaa galka libturpial. Kadibna waxaan u helnaa:
$ cd libturpial
Ugu dambeyntii waxaan rakibnaa libturpial qaabka horumarka adoo garaacaya asal ahaan (ama isticmaal sudo):
Kiiskeyga aniga iima aysan shaqeyn. Waxay ahayd inaan dhigo waxyaabaha soo socda:
# python setup.py build && python setup.py install
1.2- Cusbooneysii libturpial
Marka ay jiraan isbeddelo, waxaan ku cusbooneysiin karnaa amarka:
Oo dib u cusbooneysii cutubka:
Markaanu rakibnay libturpial waan rakibi karnaa Turubka.
2.1- Rakibidda Turpial
Waxaan fureynaa terminal oo waxaan dhignaa:
$ git clone git://github.com/satanas/Turpial.git turpial
Marka ay dhammaato waxaan galnaa galka la abuuray
$ cd turpial
Si loogu beddelo laanta horumarinta waxaan dhignaa:
$ git branch --track development origin/development
Ugu dambeyntii, waxaan rakibnaa Turubka qaabka horumarinta asal ahaan xidid u ah (ama isticmaal sudo):
Anigu ma aan tijaabin karin qaybtani sababo la xiriira dhibaatooyinka isku xirka 🙁
2.2- Cusboonaysiinta Turpial
Marka ay jiraan isbeddelo la heli karo waxaan ku cusbooneysiin karnaa amarka:
Oo dib ugu rakib:
3.- Waayahay, horey ayaan u rakibnay Turpial, oo hadda?
Si loo fuliyo Turubka waxaan geynay boosteejada:
turpial -i gtk
Haddii qof maamulo inuu sameeyo, ila socodsii. Galabta waxaan isku dayaa 😀
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Maxaa Turpial 2.0 na keenaya + Ku rakibida nooca horumarka
Wow, waxaan ugu dambayntii si aamusnaan ah ugu beddeli lahaa gwibber werwer, dabcan illaa ay xasilloon tahay;). Waad ku mahadsantahay qoraalka.
Hagaag ma aanan aqoon culeyska waxaanan ka faa’iideystaa fursad aan ku rakibo Mint waligey isma fahmo gwibber.
Dhowr daqiiqo ka hor waxaan hadda ku rakibay Turpial 1.6.7-1 My Debian Squeeze oo ma ogid sida farxadda leh ee aad ii siisay inaan arko waxa 2.0 noqon doono 😀
Waxaan isticmaalayay Turpial muddo dheer. Ma ahan wax badan inaan daacad u ahaado dalka, laakiin waxaan jeclahay xD (waxaan isku dayay Cunaguaro iyo Guácharo, nuqulo kaliya Firefox iyo Thunderbird ._.). Waan jeclahay sida 2.0 u muuqato, waan rajeynayaa.
way fiicantahay in horumarka turpial uu sifiican usocdo
Ku jawaab jors
Sawirka meeleynta Carlos Guerrero dijo
Waxaa jira QALAD tallaabada 2.2 - Cusboonaysii Turpial
Maaha macallin asal ahaan jiidaya git laakiin:
horumarinta asalka git
Ku jawaab Carlos Guerrero
By habka, waxay sidoo kale sameyn karaan:
wareegsan -i qt
In lala ordo maktabadaha QT halkii laga isticmaali lahaa GTK.
Iyo haddii aad rabto inaad ku tijaabiso MacOSX, halkan waa fulin:
WTF !!! Turpial laakiin leh Qt halkii laga isticmaali lahaa GTK ... O_O ... nacalad hani waxa duufsada ah 😀
Mahadsanid, hehe ... faahfaahsan Miyaad 2.0 ka soo dejisay Turpial? (alfa ama beta uguyaraan?), Waxaan rabaa inaan isku dayo hehe.
Aad baad ugu mahadsantahay tilmaanta aan runti sameeyo 🙂
Waxaan isku dayay inaan ku rakibo Wheezy oo leh KDE4 mana ogolaanayo ... Waxaan haystaa noocii hore ee Turpial ...
Ku jawaab vulcanr
Midnimo 5.0 ayaa loo heli karaa Ubuntu 12.04
Kuwii ugu xumaa ee darawalkeena adag